Industrial Ịsa Machine, Washer extractor - Taifeng
Automatic Ndetị Machine
Cloth Ịnụrụ Machine
Akọrọ nhicha Machine
Gas Njọ Ihicha Machine
High-arụmọrụ Ihicha Machine
Industrial Ịsa Machine
Towel ịkpakọba Machine
Anyị Nye High Qualityequipment
na-asa ákwà Equipment
akpaka Ndetị igwe
akpaka washer extractor
Jiangsu Taifeng Machinery Manufacturing Co., ltd. bụ a nnukwu saa ngwá emeputa na aha obodo nke 45,2 nde Yuan. The ụlọ ọrụ bụ a so Light Industry Machinery Association, na-emi odude Taizhou City, Jiangsu Province - obodo nke onyeisi oche Hu Jintao. Anyị ụlọ ọrụ na nsogbu na Yangtze River Delta Region. The ụlọ ọrụ na-pụrụ iche na-amị ulo oru saa ngwá, nke bụ ezi nhọrọ ika maka hotels, n'ụlọ ọgwụ, ụlọ oriri na ọṅụṅụ, textiles, uwe na saa ụlọ ọrụ.
Ịrụ Ọrụ Dịịrị China, Ịrụ Ọrụ Dịịrị Factory
Ebe ọ bụ na ọhụrụ coronavirus mere na China si ọgwụgwụ nke afọ gara aga nke na-a oké njọ ọrịa emetụta China karịsịa obodo nke Wuhan.In iji agha megide virus anyị Chinese niile na-edu ọchịchị na ugbu a anyị na-eme ihe kasị mma anyị na-agbalị imeri nke a. Biko echegbula abou ...
Ọkụ ekele ka Jiangsu Taifeng na n'isonyere CCCC
On September 25, Jiangsu Taifeng haziri niile ọrụ njem na Zhejiang.
N'isi ụtụtụ, na-egbuke egbuke anyanwụ, anyị gawara na njem anyị Zhejiang. Onye ọ bụla nwere a obere oge ọnụ njem ọnụ, ha gosiri na ha nwere nnọọ obi ụtọ na-achị ọchị n'ụzọ. The mara mma ndu nwaanyị nyere a magburu onwe nkọwa iji mee ka njem ọzọ na-akpali. ...
Company aha mgbanwe mara
N'ihi development mkpa, Taizhou Century Taifeng Mechanical na Ọdụdọ Equipment Manufacturing Co., Ltd. gbanwere ka Jiangsu Taifeng Machinery Manufacturing Co., Ltd. on July 1, 2019, na ihu ọma nke Nlekọta Nnyocha na Ihu Bureau of Taizhou Pharmaceutical High -te ...
BEIJING University nke posts na telekomunikashions
302 n'ụlọ ọgwụ ndị agha OF CHINA
Nanjing FOREING LANGUAGE Ụlọ akwụkwọ
Jiangsu Taizhou mmadụ ụlọ ọgwụ
No.599 Xiangtai Road, Economic Development Mpaghara, Taizhou, Jiangsu Province, China